Anne-Claire Coudray waxay dhalleeceeysaa wareysigii ugu dambeeyay ee Johnny Ha ... - WAA KU SAMEEYA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Anne-Claire Coudray waxay xasuusataa wareysigii ugu dambeeyay ee Johnny Ha ...
Anne-Claire Coudray wuxuu ka hadlayey wareysigii ugu dambeeyay ee Johnny Ha ...
TELES RELAY 10 July 2019
Lix bilood ka hor dhimashadiisa, Johnny Hallyday wuxuu siiyay wareysigii ugu dambeeyay ee TV-ga TF1, munaasabadda dib u bilaabashada safarka Vieilles Canailles. Ku hareereysanEddy Mitchell et Jacques Dutronc, dhagaxa daciifka ah ayaa ka soo saaray dagaalka ka dhanka ah cudurka. Wareysiga lagu siiyay arbacada 10 Luulyo Eva Roque ee TF1, Anne-Claire Coudray Xusuusnow daqiiqad "Bixin maskaxda"kaas oo ku sii jiri doona xusuustaada wakhti dheer.
“Waxa uu imminka uun ka imanayay magaalada Los Angeles, dhamaanteen waan ogaynay inuu kansar qabo oo runtiina daciif ayuu ahaa. Waxaan u malaynayaa in kani yahay wareysigiisii ​​ugu dambeeyay ee TV-ga. Dhammaanteen wax yar bay na ahayd maxaa yeelay isagu aad uma fiicnayn, aad buu u xumaa. Oo waxaa soo baxday in maalintii ku xigtay, ay aad u fiicnaatay, oo uu awooday inuu ku safro this Vieilles Canailles. Waxay ahayd mid dhaqdhaqaaq badan, waxaanna u maleynayaa in labadiisii ​​saaxibadoodba ay ahaayeen kuwa nooga naxsan sidii annaga oo kale, maxaa yeelay muddo dheer ma aysan arkin isaga. Waa run in waa daqiiqad ii dhaqaaq, runtii" ayay tidhi.
"Waan bogsadaa, waan dagaallamaa waana la dagaallamaa"
Ka itaal darnaa horteeda Anne-Claire Coudray hal fiid Juun 2017, Johnny Hallyday wuxuu taageerayaashiisa u xaqiijinayay horumarka jirkiisa: Waa tijaabo in laga gudbo. Sida dad badan oo Faransiis ah oo qaba kansar, Waan bogsiiyaa, waan la dagaallamaa, waanna la dagaallamaa. Waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysto ayuu ku dhawaaqay. Dhagaxii, oo silsiladi la galay toddoba iyo toban riwaayado cusubXiddigihii hore ee Ciyaaraha ilaa Luulyo 2017, ayaa ugu dambeyntii la baabi'iyay 6 Disembar isla isla sanadkaas, oo ahayd sannadihii 74 sano.
Anne-Claire Coudray waxay dib u xasuusaneysaa wareysigii ugu dambeeyay ee TV-ga ee Johnny Hallyday siiyay iyada: "Waxay ahayd mid aad u dhaqdhaqaaq badan"
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/anne-claire-coudray-evoque-la-derniere-interview-que-johnny-hallyday-lui-a-accor-995118
Camilla waxa uu ka muuqda muuqaal dadweyne oo ku yaal Wimbledon, maalmo yar ka dib guusha Meghan Markle
Steph Curry ayaa ka duuli doona Justin Timberlake ee Tahoe - dadka